पुलुकिसी जात्रा मनाइँदै
२०७३ असोज ४ मंगलबार, भक्तपुर । इन्द्रजात्राको अर्को आकर्षण परम्परागत पुलुकिसी अर्थात् ऐरावत हात्तीको जात्रा मंगलबार मनाइँदै छ । स्थानीय लाकुलाछेंटोलबाट सुरु हुने पुलुकिसी जात्राले भक्तपुरका वंशगोपाल, इटाछें, दरबारस्क्वायर, सूर्यमढी लगायत स्थानको परिक्रमा गर्ने प्रचलन छ । लाकुलाछें टोलका बासिन्दाले बाँसको मान्द्रोभित्र दुई व्यक्ति राखेर पुलुकिसी तयार गर्छन् । मान्द्रोमाथि नीलो कपडाले छोपेर अगाडिको भागमा हात्तीको जस्तै सुँढ समेत राखी बनाइएको पु ... बाँकी अंश»
अस्ट्रेलियामा यसरी मनाइयो कछुवाको ५० औँ जन्मदिन
२०७३ असोज ३ सोमबार, सिड्नी (अस्ट्रेलिया)। अस्ट्रेलियाको पर्थ महानगरमा अवस्थित पर्थ चिडियाखानामा राखिएको ग्यालाप्यागोस जातको सेर्रो नामको एउटा भीमकाय कछुवाको ५० औं जन्मदिवस धुमधामका साथ मनाइएको छ । उक्त भाले कछुवा ४९ वर्ष पूरा गरी आजका दिन ५० औं वर्षमा प्रवेश गरेको चिडियाखानाकी प्रमुख इमिली ट्रेनरले बताइन् । जन्मदिवस समारोहमा उक्त कछुवालाई अत्यन्त मनपर्ने सुन्तला, फर्सी, मेवा, किबि, भूइँऐँसेलु (स्ट्रबेर्री), तरबुजा जस्ता फलफूलबाट बर्थडे केक तयार पारिएको थिय ... बाँकी अंश»
छानबिन नभएसम्म मासिक रु १२ लाख रोकिने
२०७३ भदौ ३१ शुक्रबार, काठमाडौँ । जर्मन दाताले नेपालमा रहेको चिल्ड्रेन फ्युचर अर्गनाइजेसनलाई दिँदै आइरहेको मासिक रु १२ लाख अब नदिने भएका छन् । संस्थामा भइरहेको अनियमितताको स्थानीय प्रशासन तथा सरकारद्वारा छानबिन तथा दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म सो सहयोग रकम रोक्न लागिएको हो । यहाँ बिहीबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा दाताहरु फ्राउ पेट्र पाच्नर, हर हर्विग जान्ट्सिक एलेन र संस्थाकी संस्थापक डा ओल्गा लासोटाले संस्थाका अध्यक्ष रमेश धमलाले कर्मचारी तथा विद्यार् ... बाँकी अंश»
चिनियाँ शहरको बिचमा गाडीहरु कुल्चँदै गुड्यो चन्द्रमा जस्तो ठुलो बेलुन ! (भिडियो)
२०७३ भदौ ३० बिहिबार, एजेन्सी। चन्द्रमा आकारको बिशाल बलुनले चाईनाको फुजाउ शहरमा गाडी र मोटरसाईकलहर माथि गुडेको छ। ताइवान र चीनमा आएको आँधीले उक्त बलुनलाई शहरको सडकमा गुडाएको थियो। अनिनयन्त्रित बलुनले शहरमा केही समय डर पैदा गरेको थियो। हेर्दाखेरि कुनै थौरै बजेटको अर्को ग्रहकाबारे बनाईएको चलचित्र जस्तो देखिने दृश्य चीनको शहरमा साँचिक्कै देखियो। शरद ऋतुमा मनाईने चिनियाँ पर्वकालागि उक्त बलुन सजाईएको थियो। हुरीले उक्त बलुनलाई चुडाएर शहरमा दौडाएको थिय ... बाँकी अंश»
रामदेवका बफादार सहयोगी आचार्य बालकृष्ण भारतीय धनीको सूचीमा
२०७३ भदौ २८ मंगलबार, काठमाडौं । भारतीय योग गुरु रामदेवका बफादार सहयोगी एवं पतञ्जलीका सीईओ आचार्य बालकृष्ण भारतीय धनीको सूचीमा परेका छन् । ३ सय ३९ जना धनीको सूचीमा आचार्य २६औं स्थानमा परेका छन् । सीईओ आचार्य बालकृष्ण ३ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरसहित भारतीय धनी व्यक्तीको सूचीमा परेका हुन् । पतञ्जलीमा बालकृष्णको ९४ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । पतञ्जलीले अहिलेसम्म पाँच हजार करोडको कारोबार गरेको र २०१७ सम्ममा दश हजार करोडको कारोबार गर्ने लक्ष्य रहेको सार्वजन ... बाँकी अंश»
यी हुन् विश्वका १५ रंगिन प्राकृतिक दृश्य जुन हेरेपछि मनै रंगिन हुन्छ
२०७३ भदौ २७ सोमबार, एजेन्सी । प्राकृतिक दृश्य सबैलाई मनपर्छ । त्यमाथि रंगिन प्राकृतिक दृश्यले त सबैलाई लठ्ठै पारिदिन्छ । प्राकृतिक रंगिन दृश्य देखेपछि कयौं मानिसहरु ठाउँ खाज्ने र त्यहाँ पुग्न उत्सुक हुन्छन् । नपुग्नेहरु पनि इन्टरर्नेटबाट खोजि–खोजि त्यस्ता तस्वीर हेरेर भरपूर आनन्द लिन्छन् । तर, सबै रंगिन प्राकृतिक दृश्य मन लोभ्याउने खालकै हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले यी हुन् विश्वका उत्कृष्ट १५ प्राकृतिक दृश्य । यद्यपि, यी मध्ये कुनै-कुनै दृश्य मानव निर ... बाँकी अंश»
११ वर्षे बालिकाको सर्प साथी सर्प जिन्दगी
२०७३ भदौ २७ सोमबार, हमिरपुर । कतिपय मानिस सर्पको नाम सुन्न बित्तिकै डराउँछन् । अगाडि देखे भने १२ हात टाढै बस्छन् । बच्चाबच्चीको के कुरा बुढाबुढी पनि भाग्छन् सानो एक हाते सर्प देखे पनि । तर भारतको बुंदेलखण्डकी एक ११ वर्षे बालिकाको बिहान साँझको खेलोखेती भनेकै तिनै सर्पहरुसंग रहेर रमाउनु हो । उनी बिशालु सर्पसंग बसेर रमाउँदिनन्मात्र कि शिव भगवानलेजस्तै ज्यूँदा सर्पको माला नै लगाउँछिन् । तिनै ११ वर्षे नाजनिनलाई सर्पको यस्तो लत बसेको छ कि उनी एक छिन पनि सर्पब ... बाँकी अंश»
ओहो ! यस्ता बच्चा पनि
२०७३ भदौ २१ मंगलबार, काठमाडौं । जस्ता बाबु त्यस्तै छोराछोरी भन्ने त उखानै छ । अब यस्तो उखानलाई चरितार्थ गर्नका लागि पनि बच्चाबच्ची पनि साहसी त हुनैप¥यो । किनकि देखासिकी गर्ने परम्परा पुरानो हो । मानव सम्भताले नै देखासिकी गर्न जोड दिन्छ । ... बाँकी अंश»
धानबालीमा रोग फैलिँदा किसान चिन्तित
२०७३ भदौ १३ सोमबार, भीमदत्तनगर । कञ्चनपुरमा धानबाली रोपेको छोटो समयमै विभिन्न प्रकारका रोग देखिन थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् । यहाँ खेती गरिएको अधिकांश धानबालीमा गबारो र पात बेरुवा रोग देखिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । माउ पुतली किराबाट लाग्ने रोगको सङ्क्रमण धानबालीमा फैलिँदै गएको छ । किसानले धानबालीमा पात सुक्न थालेका र बोटको बीचको भाग कुहिन थालेका पीडा जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा सुनाएका छन् । बागफाँटा ... बाँकी अंश»
फिलिपिन्समा भेटियो विश्वकै ठूलो मोती, तौल ३४ केजी
२०७३ भदौ ८ बुधबार, एजेन्सी। फिलिपिन्समा एक बडेमानको मोती फेला परेको छ। ३४ केजी तौल रहेको सो मोती, विश्वकै ठूलो मोती रहेको अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। अचम्मको कुरा त सो मोतीलाई एक माझीले आजभन्दा १० वर्ष अगाडि नै फेला पारेका हुन्। तर यसको मूल्य थाहाँ नहुँदा ती माझीले मोतीलाई शुभ संकेत प्रदान गर्नेको रूपमा राखेका थिए। “हामी सबै चकित पर्यो जब उनले मोती हामीकहाँ ल्याए,” एक अधिकारीले भने। अधिकारीहरू अझैं सो मोती विश्वकै ठूलो हो भन्ने प्रमाणित गर्न ... बाँकी अंश»
पत्याउनु हुन्छ ? चार वर्षेलाई ९ कक्षामा भर्ना
२०७३ भदौ ७ मंगलबार, लखनऊ । भारत त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ नहुने रेकर्ड केही छैन । यतिबेलाको प्रसङ्ग हो शिक्षाको । एक चार वर्षे बालिकालाई पढ्न ९ कक्षामा भर्ना लिइएको छ । लिम्का बुक अफ रेकर्डसमा नाम लेखाउन सफल चार वर्षे अनन्या वर्मालाई लखनउको विद्यालयले भर्ना लिएको हो । अब उनले उत्तर प्रदेशको बोर्ड परीक्षाको तयारी गर्ने जनाइएको छ । उनले बोर्ड पास गरे विश्वकै कम उमेरमा १० कक्षा पास गर्ने कीर्तिमान रच्नेछिन् । सो रेकर्ड भने अहिले उनकै दिदीको नाममा छ । अनन्याकि द ... बाँकी अंश»
सुदूरमा गौरा पर्वको चहलपहल सुरु
२०७३ भदौ ५ आइतबार, भीमदत्तनगर । सुदूरपश्चिमाञ्चलको लोक संस्कृतिमा आधारित धार्मिक एवम् सांस्कृतिक गौरा पर्वको चहलपहल कञ्चनपुरमा सुरु भएको छ । यसवर्ष गौरा पर्व भदौ ७ गते पञ्चमीका दिन पर्ने भए पनि गौराको अवसरमा खेलिने देउडा भने दुई साताअघिदेखि नै सुरु भइसकेको छ । महेन्द्रनगरमा हरेक दिन साँझ खुल्लामञ्च, संविधान चोकलगायतका स्थानमा विभिन्न संस्थाको पहलमा गौरा खेल्नेको भीड लाग्न थालेको छ । गौरा पर्वको विसर्जन नभएसम्म गौरा घर मन्दिर परिसरमा महिल ... बाँकी अंश»
छिनभरकै आकर्षणले बिहे त भयो तर दुःखद परिणति निम्तियो
२०७३ भदौ २ बिहिबार, पोखरा । एकछिनको बोलीचाली र सुन्दर देख्दैमा विवाह गरिहाल्ने प्रवृत्ति गलत हुँदोरहेछ भन्ने शुक्रबार अपराह्न पोखराको चालिसेचोकमा भएको वीभत्स हत्याले पुष्टि गरेको छ । पाँच वर्षअघि छिनभरको भेटघाटमै स्याङ्जाको किचनाश गाविस–३ का २२ वर्षीय सञ्जीवबहादुर नेपाली र स्याङ्जाकै पौवेगौडे गाविस–२ की सोनम रेग्मीबीच अन्तर्जातीय विवाह भएको थियो । तल्लो जातिसँग विवाह गरेको भन्दै केटी पक्षका अभिभावक असन्तुष्ट बने । उनीहरुले छोरीलाई समेत वास ... बाँकी अंश»
चीनियाँ खेलाडिलाई उपाधिसँगै प्रेम प्रस्ताव
२०७३ श्रावण ३१ सोमबार, एजेन्सी। चीनका खेलाडि ही जीलाई प्रेमि किन काईले ओलम्पिकको मेडल बितरण कार्यक्रममा प्रपोज गरेका छन्। प्रपोजको समय दुवै खेलाडिका आखा रसाएका थिए। आइतवार सम्पन्न रियो ओलिम्पिकमा ही जीले महिला ३ मीटर स्प्रिंगबोर्ड समारोहमा कास्य जितिन्। हीले स्टेजमा मेडल पाएसँगै रातो रंगको बट्टाबाट हीराको औठी लिएर उनका प्रेमि किन स्टेजमा पुगे। ... बाँकी अंश»
यसरी मनाइयो क्युबाका क्रान्तिकारी क्यास्ट्रोको जन्मदिन
२०७३ श्रावण ३० आइतबार, बेइजिङ्ग। क्युबाका लोकप्रिय क्रान्तिकारी नेता तथा पूर्वराष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोले आफ्नो ९०औँ वार्षिक जन्मोत्सव मनाएका छन् । जन्मोत्सवका दिन लाखौँ क्युवावासी तथा विदेशबाट समेत उनलाई चिरायु र शुभकामनाको ओइरो लागेको छ । त्यस्तै क्युवाली जनताले पनि उल्लासका साथ सांस्कृतिक र मनोरन्जनात्मक गतिविधि आयोजना गरी देशैभरी उनको जन्मदिन मनाउँदैछन् । पूर्वराष्ट्रपति क्यास्ट्रोलाई सिगार (चुरोट) मन पर्ने हुँदा एकजना सिगार उत्पादकले ९० मिटर लाम ... बाँकी अंश»
जिजसले आखाँ खोलेको भिडियो भाइरल
२०७३ श्रावण २८ शुक्रबार, एजेन्सी । मेक्‍सिकोको एक चर्चमा खिचिएको एक भिडियो भाइरल भएको छ । उक्त भिडियोमा जिजस क्राइष्टको मूर्तिको आखा केहि समय खुल्ला देख्न सकिन्छ । सो भिडियो को सत्यता माथि त्यहाका पुरातात्विक विज्ञ इवान एश्‍केमिलाले भने , 'भिडियो प्रामाणिक छ र यसमा कुनै आपत्तिजनक बिषयबस्तु देखाइएको छैन ।' उनले भने '२० जना पुरातात्विक विज्ञ र पादरिहरुले एक हफ्ता सम्म सो भिडियो हेरेर जीससले आँखा खोलेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।' डेलीमेलका अनुसार , सेल्‍ट&zw ... बाँकी अंश»
अस्पतालमा यस्तो पनि हुन्छ !
२०७३ श्रावण २७ बिहिबार, नयाँ दिल्ली। भारतको एक अस्पतालमा उपचारका लागि स्टाफ नर्सले घुस मागेपछि उपचारमा ढिलाई हुदा दश महिने शिशुको ज्यान गएको परिवारले जनाएका छन् । भारतीय ती शिशुका परिवारका सदस्यले उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा लगिएको तर उपचारका क्रममा कागजात अघि बढाउन सोही अस्पतालकी नर्सले घुस मागेकोले उनको उपचार हुन नसकी ज्यान गएको बताएका छन् । बच्चा बिरामी भएपछि एक सरकारी अस्पतालमा लगिएको र त्यस अस्पतालका स्टाफ नर्सले उपचारका लागि आवश्यक कागजात चा ... बाँकी अंश»
गर्भवती भएर पाउनुहोस् १ करोड रुपैँया
२०७३ श्रावण २६ बुधबार, एजेन्सी । इजरायलको येहूदा नामको एक होटलले निकै अनौठो अफर ल्याएको छ । सो अफरमा भनिएको छ , 'जुन दिन तपाई होटलमा आउनुहुन्छ, सोहि दिन गर्भवती भए तपाईलाई पुरस्कार स्वरुप १ करोड रुपैया दिइनेछ ।' पुरस्कार पाउनको लागि लीप ईयर अर्थात ४ बर्षमा एक पटक आउने दिनमा सो समारोह आयोजना गरिनेछ । सो प्रतियोगितामा बिल्कुल श्रीमान्-श्रीमति मात्र सहभागि जनाउन पाउनेछन् । होटलले २९ फेरवरीमा विशाल पार्टिको आयोजना गर्दछ । जसको भोलिपल्ट डक्टरले महिल ... बाँकी अंश»
नातिले पदक जितेको खुशी थेग्न नसक्दा हजुआमाको निधन
२०७३ श्रावण २५ मंगलबार, एजेन्सी । ओलम्पिक खेलको महाआयोजनमा पदक जित्न जो कुनै एथलेटिक खेलाडिको सपना हुन्छ । साथै सो पदक पाएपछि खेलाडिको खुशीले सिमा रहनन् । तर रियोमा ५६ केजी समुहमा कांस्य पदक जीत्ने थाईलण्डका एक भारोत्तोलक क्रुराइथोंग सिनफेटको लाग यो खुशीकको समय सहिनसक्नु भएको छ । थाईल्याण्डका युवा एथलेटिक खेलाडि सिनफेटले प्रतिस्पर्धामा शानदार प्रदर्शन गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गरे र उनले कांस्य पदक जिते । सिनफेटको ८४ वर्षीय हजुरआमा आफ्नो नातिको सो ऐतिहासिक स ... बाँकी अंश»
सात फिट लामो घरीमा दुई हजार कोसा केरा !
२०७३ श्रावण १८ मंगलबार, सर्लाही । हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर ८ का मोहनबहादुर कार्कीको करेसाबारीमा पसाएको सात फिट लामो केराको घरीमा ८७ वटा काइँयो फलेका छन् । सतासी काइँयोमा दुई हजारभन्दा बढी कोसा केरा फलेको देखिन्छ । चुरे पर्वतीय क्षेत्रबाट ल्याई रोपिएको करिब ४ वर्षपछि बोटबाट केरा पसाउन थालेको मोहनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनले पाकेपछि मोलभोग जातका केराको झै गुलियो स्वाद आउने बताए । कोसाका पाटाहरु पूरा भई पुष्ट भएपछि र फलको आकार गोलो र रङ्ग हरियोबाट हल ... बाँकी अंश»